Laptọọpụ egwuregwu na-erughị € 1000, kedu nhọrọ kacha mma?
Laptọọpụ egwuregwu na-erughị 1000 euro
N'ime ndị na-egwu egwuregwu, e nwere ụfọdụ ndị na-ahọrọ igwu egwu na consoles, ma ọ bụghị na ọ gaghị enwe mkpali dị otú ahụ mgbe Sony ma ọ bụ Microsoft malitere otu n'ime ha, mana enwere ọtụtụ ndị na-ahọrọ igwu egwu na PC.
Mgbe ekpebielarị ikpo okwu, na mkpebi bụ itinye egwuregwu na kọmputa, ọ bụ oge ikpebi nke. Anyị nwere ike ịhọrọ ụlọ elu, ma ndị nwere ike ibugharị ngwa ngwa na-aghọwanye ewu ewu, ma ọ bụrụ na ha dị ọnụ ala, ọ ka mma, ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ya. Laptọọpụ egwuregwu na-erughị 1000 euro.
1 Laptọọpụ egwuregwu kacha mma maka ihe na-erughị 1000 euro
2 Ụdị kacha mma nke laptọọpụ egwuregwu na-erughị 1000 euro
2.3 hp ihe
3 Kedu ihe laptọọpụ egwuregwu na-enye gị maka 1000 euro?
3.5 Draịvụ ike
4 A na-atụ aro laptọọpụ egwuregwu maka 1000 euro? Echiche m
Laptọọpụ egwuregwu kacha mma maka ihe na-erughị 1000 euro
Ụdị kacha mma nke laptọọpụ egwuregwu na-erughị 1000 euro
MSI, onye aha ya zuru oke bụ Micro-Star International, Co., Ltd, bụ ụlọ ọrụ China na-arụpụta ụdị ọ bụla. kọmputa na peripherals maka onwe ha. Laptọọpụ ha na-ewu ewu nke ukwuu, ọkachasị n'etiti ndị na-egwu egwuregwu, ndị chere na ha so na ndị kacha mma n'ahịa.
Ọtụtụ n'ime kọmputa MSI dị oke ọnụ, na ha bụ n'ihi na ha gụnyere ihe ndị dị elu nke ukwuu iji nwee ike iji nkwa kacha mma gwuo egwu. Mana ha na-emepụta ma na-ere akụrụngwa ndị ọzọ maka ọnụ ala dị ala, ha niile nwekwara ole na ole ime ihe ike aghụghọ ndị egwuregwu na-amasị.
ASUS bụ otu n’ime ndị na-emepụta kọmpụta kacha n’ụwa, ịghọ nke anọ n'ime afọ iri gara aga na ịnọ na Top Ten kemgbe oge ochie. Na mgbakwunye na kọmpụta, ha na-arụpụta ma na-ere ihe ndị dị n'ime ya na ihe ndị dị n'ime ya, ka ha nwee ike rụpụta akụrụngwa nke ihe mejupụtara ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụdị.
ASUS ROG G513IC-HN004 - ...
Laptọọpụ egwuregwu gị kwa Ha bụ otu n'ime ndị kasị mma na ahịa Na, dị ka a ika na ndị dị otú ahụ a nnukwu katalọgụ, ha na-enwe ike na-enye ndị kasị ike akụrụngwa na ndị ọzọ na-dịtụ ọzọ akọ nke ndị na-adịghị achọ egwuregwu ma ọ bụ ndị nwere obere obere akpa nwere ike na-ekpori ndụ na niile nkwa.
Hewlett-Packard, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 80 nke ịdị adị, kewara wee malite ụlọ ọrụ ọhụrụ nke a na-akpọ naanị HP. Tupu nke ahụ, na mgbakwunye na kọmputa na ngwaọrụ ndị ọzọ. a ma ama karịsịa maka ndị na-ebi akwụkwọ haMa ugbu a, ha bụ otu n’ime ndị na-emepụta kọmputa kasị ukwuu n’ụwa.
HP nwere akara nke ọ na-eji akụrụngwa ha maka egwuregwu akpọrọ OMEN. A haziri kọmpụta OMEN maka ndị na-enwe mmasị igwu egwuregwu ma nwee ngwaọrụ ndị nwere ihe na-adọrọ adọrọ karịa, tinyekwara ihe ndị a haziri maka egwuregwu.
Lenovo bụ ụlọ ọrụ China nke na-arụpụta ma na-ere ọtụtụ ihe na ọ na-esiri ike itinye ndepụta zuru ezu, ma anyị nwere ike ikwu na ọ na-enye mobiles, mbadamba, telivishọn na ụdị ndị ọzọ. ngwaọrụ eletrọniki. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị mkpa n'ụwa, ma ọ bụrụ na ha erutela ọnọdụ a, ọ bụ n'akụkụ ụfọdụ, site n'inye ọtụtụ ngwaahịa na ọtụtụ n'ime ha na ọnụ ala dị ala.
Banyere kọmpụta ha na-egwu egwuregwu, ha nwere ụfọdụ ndị dị oke ọnụ ahịa nke kacha mma n'ahịa, mana, dịka anyị kwurula, Lenovo. ọ na-ewu ewu nakwa maka ọnụ ahịa ya dị ala, yabụ anyị na-ahụkwa laptọọpụ egwuregwu na ọnụ ahịa dị n'okpuru € 1000. Na nke kachasị mma, ha na-adịkarị mma maka ego karịa ọtụtụ ndị ha na ha na-ama.
Kedu ihe laptọọpụ egwuregwu na-enye gị maka 1000 euro?
Ihuenyo anyị ga-ahụ na laptọọpụ egwuregwu ndị anyị na-atụle n'isiokwu a agaghị adị mma, mana ha enweghị ike iru nkọwapụta: agaghị eru inch iri na asaaNke kachasị bụ sentimita 15.6, nke bụ nha ọkọlọtọ. N'ihe gbasara àgwà ha, ha dị mma, ha nwere ike ịnwe mkpebi 4K.
Na-ekwu maka kọmputa na-egwu egwu, a pụghị ịpụ na e nwere ụfọdụ ndị dị ntakịrị, ma ole na ole ga-anọ na 13 sentimita. Ihe kpatara ya bụ na ọ bụrụgodị na àgwà kachasị mma n'ụwa, igodo ahụ ga-adịkwu mgbagwoju anya, na-eme ka ọ dịkwuo mfe igwu egwu na nkasi obi na nkenke. Ya mere, ọ bụrụ na ị hụ laptọọpụ nke gụnyere akara egwuregwu na ihuenyo dị ntakịrị, chee echiche ugboro abụọ.
Dị ka anyị ga-ekwughachi oge ọzọ n'ime akụkọ a, € 1000 abụghịzi otu n'ime ọnụ ahịa kachasị ọnụ, yana ọ nwere ike ịgụnye ihe ndị dị mma na-enweghị onye nrụpụta na-efunahụ ego. Ihe nhazi kachasị na laptọọpụ egwuregwu (na ndị nkịtị) bụ Intel i7 ma ọ bụ dakọtara. M ga-anwa anwa ikwu na 9 n'ime 10 laptọọpụ maka ọnụ ahịa ndị ahụ ga-eji processor ahụ, mana ọ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu mgbe niile.
Enwere kọmputa ndị a na-ere ya na akara "ịgba chaa chaa" ma na-eme ya dị ka akụkụ nke ahịa ha, na ihe ha bụ n'ezie bụ kọmputa nwere ntakịrị ihe ike imewe, bọtịnụ backlit na components dị ntakịrị karịa nkezi. E wezụgakwa, kwa anyị nwere ike ịhụ kọmpụta nwere otu akara na-abụghị ụdị emelitere, ya mere ọ ga-ekwe omume na anyị na-ahụ nke na-agụnye ihe nhazi intel i5 ma ọ bụ ihe dakọtara. Ọ gaghị adị na mbụ, ma ọ bụrụ na anyị achọta nke a, ọ ga-abụ n'ihi na ọ bụ ihe nlereanya ochie ma ọ bụ n'ihi na ha ebipụla ihe ndị ọzọ, dị ka ihuenyo, draịvụ ike ma ọ bụ RAM.
Ọ bụrụ na ị na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ndị nwere Intel i9, a ga m asị mba. Ọ bụ ihe dị mkpa na-awụlikwa elu, ihe mgbochi ma ọ bụ akụkụ nke, mgbe ọ gafechara, ọnụahịa ahụ na-ewe nnukwu mmụba nke na-abawanye ọnụ ahịa nke ụdị ndị ọzọ.
Na-ekwughị ụdị ọ bụla, m ga-ekwu na nke a bụ isi ihe dị mkpa ikwu maka ya. Ụfọdụ kaadị eserese kacha mma maka egwuregwu na-efu ihe dịka $ 400-500 ma ọ bụ karịa, yabụ anyị nwere ike nweta echiche nke ụdị kaadị eserese nke ga-agụnye laptọọpụ egwuregwu nke € 1000 ma ọ bụ obere.
M ga-anwa anwa ikwu na, n'ọtụtụ ọnọdụ, Ikiri ụkwụ Achilles otu n'ime laptọọpụ egwuregwu na ọnụ ahịa ndị a ga-abụ kaadị eserese gị. Ha abụghị ndị kasị njọ, ma ha dịkwa anya na ndị kasị mma. Ọ bụrụ na anyị achọta ihe nwere kaadị dị ịrịba ama, ọ ga-abụ na otu ahụ na-agụnye ihe nhazi dị ala karịa, obere SSD disk, ma ọ bụrụ na ọ gụnyere otu, na 8GB nke RAM nke anyị ga-ekwu ma emechaa bụ ndị na-adịghị ahụkebe.
€ 1000 bụ nnukwu ego, yana RAM abụghị akụkụ kachasị ọnụ nke enwere ike itinye na laptọọpụ. Dabere na ihe ndị ọzọ, RAM nke gụnyere kọmpụta dị ka nke a ọ nwere ike ịbụ naanị 8 GB nke RAM, mana ego kacha gbasaa ga-abụ 16GB nke RAM.
Ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume, mana o yighị ka anyị ga-ahụ nke nwere 32GB nke RAM, ma anyị ga-akpachara anya ma ọ bụrụ na anyị chọta ihe dị ike dị otú ahụ na kọmputa nke na ọ dịghị ọnụ ahịa okpukpu abụọ ma ọ bụ karịa. Nke a nwere ike ịpụta na anyị na-emeso akara nwere aha ọjọọ ma ọ bụ na ebipụla ya ma ọ bụ kpụchaa ya na ihe ndị ọzọ, ya mere 32GB nke RAM ga-aba uru ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị njọ ma ọ bụ dị oke oke. Ma, dị ka anyị kwurula, ọ ga-abụ ihe dị nnọọ ịtụnanya na ihe anyị ga-ahụ ọtụtụ ga-abụ obere 16GB Ram.
draịva siri ike na-arapara ogologo oge ruo mgbe mbata nke SSD, draịva na-enye ọsọ ọsọ na-agụ na ide ọsọ, nke na-atụgharịkwa na arụmọrụ ka mma. Na laptọọpụ egwuregwu n'okpuru € 1000 anyị agaghị ahụ nnukwu diski SSD, ma nnukwu diski. Kedu? Daalụ maka ngwakọ.
A ga-enwe nhọrọ abụọ, nke atọ na-adịkarịghị: Nhọrọ nke mbụ ga-abụ diski nwere akụkụ na SSD yana akụkụ na HDD, nke nwere ike ịbụ 128/256GB na SSD na ihe dịka 1TB na HDD. Na SSD akụkụ ga-aga sistemụ arụmọrụ na ihe anyị na-eji kasị, na HDD akụkụ nke izugbe data. Nhọrọ nke abụọ bụ na ihe niile bụ SSD, yana ọnụahịa anyị bụ gbalịsie ike itinye 512GB na SSD. Ihe dị m ka ọ dị obere bụ na, maka ọnụahịa a na ugbu a, anyị ga-ahụ laptọọpụ egwuregwu na-agụnye naanị otu diski HDD, mana, ọ bụrụ na anyị emee ya, diski ahụ ga-abụrịrị nnukwu iji kwado mmefu ahụ.
RGB na-anọchi anya Red, Green na Blue, ya bụ, ihe mejupụtara nke agba (acha uhie uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na odo) n'ihe gbasara ike nke agba ndị bụ isi nke ìhè. RGB dị na kọmpụta nwere ihe jikọrọ ya na ọkụ ha na-amụnye, na ọkụ a dị na kọmpụta na-apụtakarị na a keyboard iberibe.
Igodo RGB kacha mma nwere ụkpụrụ agba nwere ike gbanwee, na nke kachasị elu na-enye anyị ohere ịhazi ọtụtụ igodo nwere otu agba na ndị ọzọ na ndị ọzọ. Nke ikpeazụ agaghị adị mfe ịchọta na laptọọpụ egwuregwu na-erughị € 1000, nke a na-ahụkarị bụ igodo azụ azụ nwere akọwaworị agba. Mgbe ụfọdụ, ihe anyị ga-ahụ ga-abụ naanị kiiboodu nke na-ebunye ọkụ na-acha agba, mana ọ bụ otu ihe na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịhazi ya.
A na-atụ aro laptọọpụ egwuregwu maka 1000 euro? Echiche m
Maka m, ịza ajụjụ a adịghị mfe ma ọlị. Ọ bụghị n'ihi na Laptọọpụ kacha mma emebere maka egwuregwu meriri ihe mgbochi ahụ, yabụ na ọ bụ onye egwuregwu a na-ajụ ajụjụ ga-ajụ onwe ya ajụjụ ụfọdụ: achọrọ m ihe kacha mma iji kpọọ aha niile nke ọma? Ọ ga-adị m mkpa ịkwanye egwuregwu m? Achọrọ m ahụigodo kacha mma yana ihuenyo kacha? Ọ bụrụ na azịza nke ajụjụ ndị a bụ ee, o nwere ike ịbụ na e mebeghị ha maka gị.
Ugbu a ọ bụrụ na ị bụ onye onye egwuregwu nkịtị na-aga igwu egwu n'ụlọ ma dozie maka ahụigodo ọkara na okirikiri nhọrọ ukwuu, ọ nwere ike ịba uru. N'ihe na-erughị € 1000 ị ga-ahụ laptọọpụ ga-enye gị ohere ịme ọtụtụ aha ndị dị ugbu a, mana buru n'uche na ụfọdụ nwere ike ịpụta na obere oge nke na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na laptọọpụ ọhụrụ gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ. gwuo egwu na eserese na ultra.
O yikwara ka ọ dị mkpa ịkọwa ihe na-enweghị ihe jikọrọ ya na egwuregwu: laptọọpụ na-egwu egwu na-enwekarị ihe dị mma n'ime na n'èzí akụrụngwa, ya mere otu maka ihe na-erughị € 1000 bụ a ezigbo nhọrọ maka ọrụ na iji maka ntụrụndụ maka uru ya maka ego. N'ezie, maka ebumnuche ndị a, o yikarịrị ka anyị ga-ezuru oke, mana anyị agaghị enwe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ egwuregwu kachasị ọhụrụ na nke kachasị ike na ahụigodo kacha zie ezie na mara mma.
Laptọọpụ maka ihe na-erughị 1000 euro
Laptọọpụ maka ihe na-erughị 500 euro
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ahịa » Laptọọpụ egwuregwu na-erughị 1000 euro